HAITAO SY FIAROVANA NY BIBY : Hifampizara fahalalana ny mpikarakara sy liana amin’ny gidro | Madatopinfo
HAITAO SY FIAROVANA NY BIBY : Hifampizara fahalalana ny mpikarakara sy liana amin’ny gidro
Nanao vela-kevitra ho an’ny mpanao gazety ny Mpikambana ao amin’ny mpiaro ny zavaboaary, indrindra ny biby tongotrefatra arovana, ny alakamisy 26 Jolay, teo Antaninarenina mahakasika ny fanombohana ny « Madagascar Lemurs Portal » izay vavahady anehoana ny karazan-gidro, Maki, sns eto Madagasikara . Nanambara ireo mpikambana tahaka ny Fondation pour les aires protégées et la biodiversités de Madagascar, Wildelife Conservation Society, Réseau de la Biodiveristé de Madagascar, Groupe d’Etudes et de la Recherches sur les Primates de Madagascar sns fa misokatra amin’ny fomba ofisialy ny varavarana ifandraisandavitra ao amin’ny alalan’ny « Madagascar Lemurs Portal ».
Manerana an’Afrika, ny Malagasy irery ihany no manana vavahadim-pahalalana izay anaty tambazotran-tserasera mahakasika ny biby arovana, tahaka ny rajako, araka ny fampitam-baovao teo Antaninarenina. Malagasy avokoa no hifampizara fahalalana sy hifehy ny teknikan’ny fampidirana sy fizarana fahaizana anatin’io tranokalan-tserasera io. Ny olona rehetra maneran-tany afaka manontany sy maneho hevitra anatin’ny tambazotra. Misy endrika maro mahakasika ny fahalalana ankapoben’ny gidro, varika izay ahitana karazany 110 manerana ny Nosy ao anaty tranonkala izay hita anaty www.lemursportal.org
Tandindomin-doza ny gidro
Ny anton’ny tetik’asa tao Antaninarenina, araka ny efa iaraha-mahalala dia anisan’ireo 90%n’ny harena miavaka sady mampiavaka an’i Madagasikara io. Ny 105 amin’ ireo112 efa fantatra no ahiana ho lany tamingana noho ny fitrandrahana tsy misy fenitra izay atao sakafo, vola, sy noho ny tevy ala. Izany indrindra no nahatonga ireto fikambanana miaro ny voaary sy ny zava-mananaina ireto hikaondoha sy hiara-hiasa nanomboka ny volana Febroary2016. Ny olana fototra araka ny nambaran’ny tomponandraikitra dia ny tsy fahampian’ny fampitam-baovao sy ny fahalalana mahakasika ny maha-zava-dehibe,ny tombotsoa,mitarika vola sy mpizahatany ho an’ny faritra sy firenena azy ireny. Ankoatra ny Ministera mpiahy telo, Fampianarana ambony, Tontolo iainana, Fizahan-tany, ny firaisamonim-pirenena no mahatsapa tena amin’ny fandraisana andraikitra goavana amin’ny fikarakarana sy fiarovana ny karazan-drajako eto Madagaikara. Noho ny fahantrana sy ny tsy fahalalana dia zary sakafon’ny mponina amoron’ala izy ireny. Olona telo no nahiditra am-ponja roa taona lasa izay noho ny fihazana ireo gidro ireo.
Haja NIRINA/ Claude Eric VONJINIAINA